Noforonin'Andriamanitra araka ny endriny ny olombelona
"Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik 'Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy" - Gen. 1:27
Heniky ny fahalianana sy fifaliana lalina ny lanitra manontolo raha namorona izao tontolo izao sy ny olona Andriamanitra. Sokajy vaovao sy miavaka teo amin'ny zavaboary ny olombelona. Noforonina "tahaka ny endrik'Andriamanitra" izy ireo, ary ny fikasan'ny Mpamorona dia ny hamenoan'izy ireo ny tany. Noforonina mba hanana fifandraisana akaiky amin'ny lanitra izy ireo, ka handray hery avy amin'Ilay Loharanon'ny hery rehetra. Noforonina mba hivelona fiainana tsy misy fahotana izy ireo, niaraka tamin'ny fanohanan'Andriamanitra.
Tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ihany i Adama sy Eva, fa mpianany koa. Nandray lesona avy tamin'Ilay Fahendrena tsy hita lany izy. Sady novangian'ny anjely izy no afaka niresaka nifanatrika tamin'Ilay Mpamorona azy koa. (...) Ny zava-miafin'izao rehetra ary izao hita maso, "dia ny fahagagana ataon'Ilay tanteraka amin'ny fahalalana" no fototry ny fianarany sy ny fifaliany. Ny lalana samy hafa mifehy izao tontolo izao, izay efa nandanian'ny olombelona herim-po sy ron-doha be dia be hatramin'ny enina arivo taona izay, dia nasehon'Ilay Mpita-marika mahay sy Mpitahiry ny zavatra rehetra azy mivady. Nahay niresaka tamin'ny voninkazo sy ny raving maitso mbamin'ny hazo izy, ka nahalala taminy ny tsiambaratelon'ny fiainan'ny tsirairay avy. Hatramin'ireo leviatana mahery any an-dranomasina ka hatramin'ireo bibikely tsy hita maso manidintsidina eny amin'ny rivotra, dia samy nahazatra an'i Adama avokoa. Nomeny anarana avokoa izy rehetra ary samy fantany daholo na ny toetrany na ny fanaony. Ny voninahitry ny habakabaka, ny kintana tsy hita isa ary ny masoandro amam-bolana samihafa sy ny fandehan'izy rehetra tsirairay avy eny amin'ny lanitra, ny "fihevahevan'ny rahona matevina", ny zava-miafin'ny hazavana sy ny feo, ny momba ny andro sy ny alina, ireny sy ny toy ireny no fototry ny lesona nianaran'ireo razambentsika. — PP, 50,51
Noforonin'Andriamanitra ho voary manana aina manan-toerana ambony ny olombelona; ny olombelona irery no noforoninatahakany endrik' Andriamanitra ary afaka hanana anjara amin'ny toetr'Andriamanitra, afaka hiara-miasa amin'ny Mpahary sy hanatanteraka ny fikasany. — RH, 21 Aprily 1885